IJabra Elite 75t, ukuhlaziywa komkhiqizo oyindilinga kakhulu | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 27/03/2021 15:00 | Gadgets, Izibuyekezo
Siyaqhubeka iyahlaziya imikhiqizo yomsindo, ikakhulukazi amahedfoni I-TWS yemikhiqizo eqhathaniswe kakhulu ukukunikeza ezinye izindlela etafuleni nokwenza lula ukukhethwa komkhiqizo ovumelana nezidingo zakho kanye nomnotho wakho, futhi kulandelana kwezinto, ama-headphone amasha afika etafuleni lethu. ukuhlaziywa.
Sikhuluma ngomunye wemikhiqizo kaJabra evuthiwe kakhulu, ama-headphones e-Elite 75t, thola ukuhlaziywa kwethu okujulile ngevidiyo nangokwebhokisi elinemininingwane. Sikutshela ukuthi isipiliyoni sethu besikuphi futhi uma kufanelekile ukuthenga lawa ma-headphone we-TWS okukhulunywe ngawo kakhulu.
Njengakwezinye izikhathi eziningi, sinevidiyo phezulu lapho uzokwazi khona ukuthokozela ukungabikho kwebhokisi, amathuba ayo wokumiswa futhi yonke imininingwane yokuhlaziywa okujulile komkhiqizo, ngakho-ke sincoma ngokuqinile ukuthi ubheke ngaphambi noma ngemuva kokufunda ukuhlaziywa kwethu okuningiliziwe. Thatha ithuba ubhalisele isiteshi sethu, usishiyele imibuzo ebhokisini lokuphawula ngakho-ke ukwazi ukusisiza ukuthi siqhubeke sikulethela lolu hlobo lokuqukethwe, Ingabe bakukholisile? ungabathenga ngentengo emnandi kakhulu ku-Amazon.
1 Izinto zokwakha kanye nokuklama: Ukusebenza nokumelana
2 Izici zobuchwepheshe nezomsindo
3 Ukuzimela kanye nezinga lokuxhuma
4 Ikhwalithi yomsindo nohlelo lokusebenza lweJabra Sound +
Izinto zokwakha kanye nokuklama: Ukusebenza nokumelana
Sikhuluma ngama-headphone we-TWS asezindlebeni ngomklamo ohluke kakhulu, ingxenye ecindezelwe, ngaphandle kokunwebeka ngaphandle, futhi lokho kusekela ukuxhaswa kwabo ngokuphelele kuphedi elihlanganiswe nendlebe. Zilingana kahle, futhi kubonakala ngathi aziweli ezivivinyweni zethu zezemidlalo, kepha ngenxa yalokhu kufanele unikeze isigubhu esivumelana nendlebe yakho. Zinesisindo esincane kakhulu, cishe u-5,5 amagremu endlebeni ngayinye, enobukhulu obucindezelwe kakhulu. Eqinisweni, uma sinikezwe ipulasitiki yayo ye-matte, singaze sicabange ukuthi ikhwalithi ilungile, into ekude kakhulu neqiniso, kubonakala sengathi kungumkhiqizo ongavikeleki ezivivinyweni zethu futhi ukukhanya kwayo kuyaziswa lapho sandisa ukusetshenziswa.
Isisindo sebhokisi le-Shit: amagremu angama-35
Isisindo i-earphone ngayinye: 5,5 amagremu
Ubukhulu bebhokisi: 62.4 x 19.4 x 16.2 mm
Imibala: Mnyama, mpunga negolide
Ngokuqondene necala, idizayini ende futhi engunxande enamajika ambalwa, inesisindo esiphelele se- I-35 amagremu futhi inezinkomba, kanye imbobo ye-USB-C ngemuva. Kuyinto ephikisayo impela, ukuthinta okumnandi nokwakheka okusinika umuzwa wekhwalithi. Akufanele sikhohlwe ukuthi lawa mahedfoni aqinisekisiwe nge-IP55, Yize kungacwiliseki, lokhu kuhlukaniswa kuzosiqinisekisa okungenani ukuthi singazivocavoca ngaphandle kokwesaba ukuhlupheka ngenxa yezithukuthuku noma ukusaphazeka okuvamisile.
Izici zobuchwepheshe nezomsindo
Siqala ngento ebalulekile, umsindo, sine-bandwidth yesipika ye- I-20 Hz iye kuma-20 kHz wezipika lapho idlala umculo ne-100 Hz iye ku-8 kHz esimweni sezingcingo. Okwakho, isinikeza umshayeli we-earphone ngayinye engu-6mm ngamandla anele, futhi kuzohambisana imakrofoni ezine ze-MEMS lokho kuzosisiza ukuthi sinikeze izingcingo ezicacile. Uma ufuna ukwazi ukuthi izingcingo zizwakala kanjani, ungabheka ividiyo, lapho sihlola khona umbhobho, ngamafuphi se uvikela kahle futhi wenza izingcingo nabo, ecabangela ukuthi bavikelekile emoyeni, kwamukelekile impela.
Asinakho ukukhanselwa komsindo, sinokukhanselwa komsindo okungenziwayo okunikezwa ukwakheka kwamapads futhi lokhu kuzoncika kakhulu ekutheni sizifaka kanjani. Ngalokhu, njengoba sishilo ngaphambili, sisebenzise amaphedi abo osayizi abahlukahlukene. Ukukhanselwa komsindo okungahleliwe kuyimpumelelo impela, kukhombisa ukuthi basebenze kulesi sici futhi kungaphezu kokwanele ukuphatha ezokuthutha zomphakathi nsuku zonke ngaphandle kwama-frills amaningi.
Ukuzimela kanye nezinga lokuxhuma
Ngokuqondene nebhethri, asinayo imininingwane ethile mayelana ne-mAh ephethwe yizo zombili ihedsethi necala lokushaja elithile. Yebo, kufanele sigcizelele ukuthi isisekelo esiphansi secala lokushaja sinokuhambisana kwe- ukushaja okungenantambo ngezinga le-Qi. Ngokwakhe, yenaUkushaja okusheshayo kuzosivumela ngemizuzu eyi-15 kuya kumzuzu engama-60 wokuzimela, kuthatha okuncane kunehora ukwenza inkokhelo ephelele.
Memoria ukuvumelanisa: amadivayisi ayi-8
Ububanzi: cishe ngamamitha ayi-10
Amaphrofayli I-Bluetooth: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2
Ngokwengxenye yayo, ngenxa yokuxhuma kwe-Bluetooth 5.0 kanye namaphrofayili ayo ahambisanayo, ukuzimela okuthenjisiwe kwamahora ayi-7 kucishe kulandelwe ngokuqinile, iyahluka kancane kuye ngevolumu ephezulu esiyinikezile.
Ikhwalithi yomsindo nohlelo lokusebenza lweJabra Sound +
Lezi zinhlobo zezinhlelo zokusebenza, ngokwethembeka, zibonakala kimi zingezwe elibaluleke kakhulu. Nge-Jabra Sound +, etholakala kuzo zombili i-iOS ne-Android, uzokwazi ukwenza ngezifiso imingcele eminingi yamahedfoni ezokwenza isipiliyoni sakho siphelele ngokwengeziwe. Ngaleyo ndlela senza kusebenze i-HearTrhoug Ukunciphisa umsindo womoya, khetha umsizi wezwi, ithuba lokucinga ama-headphone ethu futhi ikakhulukazi izibuyekezo ziyatholakala App (kuvidiyo yethu ungayibona isebenza).
Ngokuqondene nomsindo, IJabra Elite 75t Ngimangazwe yizinga eliphakeme levolumu elinikezwayo, elikufihla kakhulu ukungabikho kwe-Active Noise Cancellation. Kodwa-ke, ama-bass amakwe ngokweqile engikuthandayo, into esingayixazulula ngokulingana kohlelo lokusebenza. Kuwo wonke amanye amathoni abukeka elungiswe kahle futhi anikela ngekhwalithi ehambisana kakhulu nentengo yomkhiqizo.
Ekugcineni, sizokhuluma ngentengo, ungabathenga ngokunikezwa okuthile kusuka ku- € 129 ezindaweni ezijwayelekile zokuthengisa ezifana ne-Amazon noma iwebhusayithi ye UJabra. Usuvele uyazi ukuthi sihlala sincoma inani elingcono lemali. Kulokhu unama-headphone ngentengo ethe xaxa ucabangela ukusebenza, kepha ngesiqinisekiso sokuthi uJabra uyayinakekela, yaziwa umhlaba wonke ngalolu hlobo lomkhiqizo. Kodwa-ke, uma ucabanga ukuthi sebenesikhathi eside kangakanani bemakethe, ungakhetha ezinye izindlela ezinenani elingcono lemali noma ngisho nangokukhanselwa komsindo okusebenzayo.
Kuthunyelwe ku: I-27 March ka-2021
Ukulungiswa kokugcina: I-26 March ka-2021
Idizayini ye-Premium nokuzizwa
Ikhwalithi yomsindo enhle
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » IJabra Elite 75t, ukuhlaziywa komkhiqizo oyindilinga kakhulu